musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » avhiyesheni » Boeing 777X inosvika muDubai ye2021 Dubai Airshow
Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Bhizinesi Kufamba • Musangano Weindasitiri Nhau • misangano • nhau • vanhu • Kutarisirwa • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau • UAE Kuputsa Nhau • USA Kuputsa Nhau
Boeing 777X inosvika muDubai ye2021 Dubai Airshow.
Boeing 777-9 ndege yekuyedza ndege inoita yekutanga pasi rose, ichibhururuka isingamire kubva kuSeattle kuenda kuUnited Arab Emirates.
Boeing 777X ichange ichiratidzwa kuDubai Airshow kutanga Mbudzi 14, 2021.
Kuvaka pamusoro peakanakisa eindastiri-inotungamira 777 uye 787 Dreamliner mhuri, iyo 777-9 ichava yepasirese yakakura uye inoshanda kwazvo twin-injini jet.
Mhuri ye777X ine huwandu hwe351 maodha uye zvisungo kubva kune vasere vanotungamira vatengi kutenderera pasirese.
Iyo itsva Boeing 777X yakasvika Dubai World Central na14:02 pm (GST) nhasi, pamberi peDubai Airshow iri kuuya. Ndege ichange iine static kuratidzwa uye inoratidzwa muchirongwa chekubhururuka chekuratidzira kutanga Mbudzi 14.
Iyo ndege ye777-9 yekuyedza ndege yakaita ingangoita maawa gumi nemashanu isingamire kubva kuSeattle's. Boeing Munda ku Dubai, ndege yekutanga yepasi rose uye kubhururuka kwakareba kusvika parizvino kwe777X sezvo ichiri kuenderera mberi nechirongwa chekuyedza.
Kuvaka pane akanakisa eiyo indasitiri inotungamira mhuri 777 uye 787 Dreamliner, iyo 777-9 ichave yakakura uye inoshanda zvakanyanya pasi-injini jeti, ichiunza gumi muzana kushandiswa kuri nani kwemafuta, kuburitsa uye mutengo wekushandisa pane makwikwi uye akasarudzika mutakuri. ruzivo. Mhuri ye10X ine huwandu hwe777 maodha uye zvisungo kubva kune vasere vanotungamira vatengi kutenderera pasirese. Kwekutanga kuendeswa kwendege kunotarisirwa mukupera kwa351.
Boeing inogadzira, inogadzira uye masevhisi ndege dzekutengesa, zvigadzirwa zvekudzivirira uye masisitimu emuchadenga kune vatengi munyika dzinopfuura zana nemakumi mashanu. Semutengesi wepamusoro weUS kunze kwenyika, kambani inosimudzira matarenda epasi rese supplier base kusimudzira mukana wehupfumi, kusimba uye kukanganisa munharaunda. Chikwata chakasiyana cheBoeing chakazvipira kuvandudza remangwana uye kurarama zvakakosha zvekambani zvekuchengetedza, kunaka uye kuvimbika.
November 14, 2021 pa 05: 18
Maita basa rakanaka. Ndakanakidzwa chaizvo nekuverenga kwayo positi iyi zvakakwana kuti nditsvage kunyora ichi chakanakisa chinyorwa uye chinobatsira positi ndatenda nekugovana. Bhurawuza iyi runyorwa rwezvinyorwa zvinonakidza uye zvinyorwa pamisoro yakaita sehutano, mufaro, kubereka nezvimwe.